Jiri radish, nke ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ? - Radish - 2019
Njirimara bara uru nke radishes, na otu esi esi eji ya eme ihe
Radish bụ otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị, ndị a hụrụ n'anya na akwụkwọ nri dị mma na ọnọdụ anyị. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara kpọmkwem ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị bara uru ya na ohere nke iji osisi na ndụ. Na ihe omumu a, anyi ga anwa inyocha uru nile ya.
Mgbọrọgwụ akwụkwọ nri na epupụta, uru bara uru nke radishes
Njikere na ihe oriri
Radish na cosmetology
Esi eji radish na nkà mmụta ọgwụ
Esi eme ihe n 'okpokoro, usoro nri nri
Radish na radiculitis
Iji radishes maka ọrịa shuga
Otu esi ehichapu eriri afọ na radishes
Utu bara uru maka ndi di ime
Esi họrọ radish
Mgbe ị na-eji radishes nwere ike imerụ ahụ
Radish: egwu egwu
Ya mere, olee uru radish bara uru? O nwere vitamin PP, otu B, na vitamin C. Iri 250 grams nke radish, ị ga-ekpuchi ọnụego kwa ụbọchị nke vitamin dị mkpa maka ahụ. Osisi ahụ nwekwara ígwè, magnesium, phosphorus, calcium, sodium, potassium. Ihe ndị a na-eme ka e guzobe ọbara na nkịtị metabolism n'ime ahụ.
Radish bụ ọgaranya na nicotinic acid, riboflavin, thiamine. Mkpụrụ mọstad na-enye ihe ụtọ dị iche iche na akwukwo nri, nke na-enye radish na ọ bụghị naanị uru bara uru, kamakwa contraindications. Ya mere, a na-atụ aro maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga, oke ibu, gout, ma a dụrụ ya ọdụ ka ha ghara iji ya mee ihe maka ndị nwere ọrịa obi, usoro eriri afọ, imeju, pancreas, duodenum, afo.
Ị ma? Ọ bụ radish na ezinụlọ Cabbage bụ radish. Ndị na-eto eto kweere na Central Eshia bụ ebe a mụrụ ya, ebe ọ gbasaa na China na gburugburu ụwa. Ọ dabara na anyị latitudes Pita Peter. Taa, a na-eji mkpụrụ osisi na akwukwo radish eme ihe ọ bụghị nanị na nri, kamakwa maka ọgwụgwọ.
N'ihi nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ihe bara uru, osisi ahụ nwere ndepụta zuru ezu nke ihe bara uru bara uru. N'ịmara ihe vitamin dị na radishes, a na-eji ya n'oge opupu ihe ubi ka ọ bụrụ ngwá ọrụ magburu onwe ya iji merie vitamin erughi. Na mgbakwunye, Otu nnukwu vitamin C na-enyere aka ịlụ ọgụ.
Mmanụ ndị dị oké ọnụ nwere obere choleretic properties, nke na-enyere aka meziwanye ọnyá peristalsis, ọgụ edere. Ọzọkwa, ihe oriri na-akpali agụụ, ọ bụ ezie na o nwere ezigbo ihe ọkụ ọkụ.
Uru nke radishes maka ahụ bụ ime ka ọbara hemoglobin dị n'ọbara, kwalite ọrụ nke usoro obi, gbanye usoro nchịkwa. Mgbọrọgwụ kụrụ ugboro 2.5 karịa eriri karịa, dịka ọmụmaatụ, zucini. Ya mere, ọ na-enyere aka iji zuo oke, hichaa eriri afọ na normalize ọkwa cholesterol n'ime ahụ. Ekele pectin dị na akwụkwọ nri, ọ nwere ike iji ya mee ka ehicha ahụ na ọgwụ ndị ọzọ dị njọ.
N'ikwu banyere uru nke radishes, ọ gaghị ekwe omume ikwu banyere mgbochi ya na cancer. Ya mere, n'ihi na acha uhie uhie nke akpụkpọ ahụ nke radish na-ezute anthocyanin mmiri, nke nwere ihe ndị yiri ya. E wezụga ya, e nwere ọtụtụ flavonoids na radishes, nke bụ antioxidants na-emepụta ihe ma na-eme ka mmetụta dị n'ahụ ahụ nke na-enweghị ihe ọ bụla ga-emetụta ya. Usoro ndị a na-enye nchebe ọzọ maka ahụ megide cancer.
Ọtụtụ ndị na-eche ma ọ ga-ekwe omume iri mkpụrụ osisi radish? N'ụzọ dị ịtụnanya, n'ezie, ị nwere ike. A na-esi na ha site na ị gbakwunye cheese na akwa. Nri dị otú ahụ nwekwara mmetụta mgbochi, igbochi atherosclerosis na ọrịa vascular, hichaa eriri afọ. N'okwu ikpe a, a na-atụ aro ka ị jiri ngwakọta nke ihe ọṅụṅụ nke radish na akụkụ abụọ nke ihe ọṅụṅụ carrot.
Ị ma? Radish bụ osisi mbụ a ga-etolite na ụlọ nnyocha dị na mbara igwe n'èzí Ụwa. A họọrọ osisi ahụ maka ọsọ ọsọ, ike iji akụkụ ya niile, nakwa maka ihe ndị bara uru nke vitamin na ihe ndị na-emepụta ihe.
Na-ekwu maka nhichacha ihe nke radish, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe ndị na-eri nri nke osisi ahụ. 100 g nke akwukwo nri nwere banyere 15 Kcal. N'ịbụ ndị na-ere ọkụ na abụba na-ere ọkụ, ndị ọkachamara na-akwado ike iri nri radishes. N'eziokwu, ọ dị mkpa iburu n'uche njirimara nke ahụ gị ma ghara ịtụ anya na ị ga-enwe mmetụta dị egwu. N'ime oge dum, onye toro eto kwesịrị iri ihe kilogram nke radish ọhụrụ.
Otú ọ dị, ụfọdụ na-enwe obi abụọ na ikike nke gụnyere radish dị ukwuu na nri n'ihi eziokwu ahụ na-akpali agụụ. Ma vitamin C, nke na-eme ka nke a pụta, na-elekwasịkarị anya na akpụkpọ anụ uhie nke mgbọrọgwụ, n'ihi ya i nwere ike ilekwasị anya na ụdị radish.
Lezienụ anya! Iji nweta uru zuru oke site na radish, ọ dị mkpa iji tubers na-atọ ụtọ, nke nwere oke ụcha. Radish na-egbuke egbuke efunahụ ya uru bara uru.
Mgbe ị na-eji radish na-eme nri, ị kwesịrị iji naanị mmanụ na-esi nri ka mmiri na ihe ndị na-emepụta ihe dị mma. Ọzọkwa, ọ na-achọsi ike ọ bụghị nnu na efere, ma nyekwuo garlic. Iji radishes na ọnọdụ a, ị nwere ike hapụ 3-4 kwa ọnwa kwa ọnwa.
N'iji ndepụta dị mma nke akwụkwọ nri bara uru, ihe ezi uche dị na ya bilitere, bụ radish bara uru na cosmetology? Ọ na-apụta na e jiri ya mee ihe dị ka ihe ịchọ mma ebe ọ bụ na oge ochie, karịsịa maka nlekọta anụ ahụ. Ya mere, na ịchọrọ mmiri radish dị njikere, ị nwere ike iweghachi na moisturize akpụkpọ ahụ, nye ya ọhụụ na elasticity. O zuru ezu iji dochie ihe ọṅụṅụ si na radish ma hichapụ ihu ya ugboro abụọ n'ụbọchị. Ịsachasị ma mee ka ihu gị dị ọhụrụ ga-enyere ihe nkpuchi nke radish grated. Ke adianade do, ọ ga-enye aka ịzụ anụ ahụ na vitamin dị mkpa.
Ugbu a, ka anyị hụ otú ndị mmadụ si eme ka radishes na-enweta uru kachasị ma mebie nsogbu ha na ahụ ike. N'ihe mgbọrọgwụ, a na-eji ya na-agwọ ọrịa diathesis ụmụaka, na-enye nwa ahụ tupu ya lakpuo ihe oriri ọhụrụ. Maka ọgwụgwọ kansa, a na-eji mmanụ aṅụ na-agbanye radish na mmanya uhie. Ngwurugwu akwukwo nri, ala n'ime ogwu, na agwakọta ya na mmiri di nfe, mma ma tinye ya na ozo nke ahu ahu, mee ka ajuju di iche iche maka neuralgia na radiculitis.
Bibie afọ ọsịsa ga-enye aka ngwakọta nke akwụkwọ nri ise na-esichapị akwụkwọ na teaspoon nke starch na 200 ml nke mmiri ara ehi. Ọ ghakwara ịṅụ mmanya ozugbo ọ kwadebechara ya. Ọ bụrụ na mmetụta a na-echere ogologo oge abịabeghị, a ga-emeghachi usoro ahụ mgbe awa anọ gasịrị.
Maka ọgwụgwọ, jiri mmiri radish diluted, nke na-agaghị ewe iwe na nri. Weghachi ụda nke tract gastrointestinal nwere ike ịbụ ngwakọta nke ihe ọṅụṅụ radish na carrots, nke a ghaghị ịṅụ mmanya n'ime otu awa mgbe e kwusịrị nkwadebe. Ọ bụrụ na ị na-etinye ngwakọta na ihe ọṅụṅụ bekee, ị nwere ike wepu obere nkume site na gallbladder. Maka cholelithiasis na catarrh nke traktị respiratory elu, a na-atụ aro ka ị ṅụọ mmanya na-egbuke egbuke, ose na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na kukumba. Mgbe ị gbakwunye mmanụ aṅụ na ihe ọṅụṅụ yabasị na mmiri radish, ha na-emeso oyi.
Ọ dị mkpa! Ihe ọṅụṅụ radish nwere cyanogenic glycoside substance. A maara maka ịkpasu isi nsogbu na usoro endocrine, ma mgbe ụfọdụ, ọ na - eduga ọrịa ọrịa na - aga n'ihu.
N'ịghọta uru ndị a na-eji ihe oriri a eme ihe, na-achọ ka m mara otú e si eji ya iji nweta mmetụta kachasị. Anyị ga-ekwukwa banyere ya n'ihu.
Ihe ngwọta kacha mma maka oyi - Mmiri radish weere na mmanụ aṅụ na ihe ọṅụṅụ ihe ọṅụṅụ. Iji mee nke a, were ihe ndị dị na akụkụ hà nhata, kpochaa ya, wee buru tablespoons atọ ugboro atọ n'ụbọchị 20-30 nkeji tupu nri. Usoro ọgwụgwọ ọ dịkarịa ala otu na ọkara izu. Ọ bụrụ na oyi na-esonyere ụkwara siri ike, ịnwere ike iji akwụkwọ nri akwụkwọ nri sie na mmanụ aṅụ.
A na-achọpụta na ndị na-eme ka radishulitis na neuralgia na-ebelata ihe mgbu mgbe niile. N'okwu a, ọ dị mkpa iji ọtụtụ ihe mgbọrọgwụ dị mkpa iji kpuchie ọnyá ahụ.
Ebe osisi ahụ nwere insulin na-emepụta, ọ na-atụ arokarị maka ndị ọrịa mamịrị. Ezigbo iji salads na mgbakwunye nke ihe oriri a iji normalize metabolism, belata shuga shuga, jupụta nri na vitamin. N'eziokwu, ị pụghị ịgbanwe nnukwu nri, na-ejuputa ya na radish - osisi ahụ enweghị ike iji dochie anya insulin. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-aga iji radishes na ọgwụgwọ nke ọrịa a, ọ ka mma ka gị na dọkịta gị buru ụzọ hụ.
Mgbọrọgwụ nwere ike ihicha eriri afọ, ọ bụghịkwa akụkụ nke osisi a na-eji nri. Ya mere, akwụkwọ nke radish na-eji maka salads, na uru nke ha adịghị ala, karịa na mgbọrọgwụ kụrụ. Nakwa ịmepụta metabolism ma hichaa eriri afọ na-enyere mkpụrụ osisi radish aka. Akwụkwọ nri na ụdị ọ bụla mma nsia motility, bara uru maka afọ ntachi na atony.
Ọ dị mkpa! Mgbe a na-echekwa mgbọrọgwụ ruo ogologo oge, ọ na-eme ka starch na ụbụrụ na-eme ka ụba dịkwuo elu. Na-eri ụdị radish egwu na-ewe iwe na nsia mucosa.
Ihe a na-atụghị anya na radish bụ nnukwu mkpụrụ vitamin. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'oge opupu ihe ubi, mgbe onye ọ bụla na-enweghị vitamin, ndị inyom dị ime dị okpukpu abụọ. Ya mere, radish na nke a - onye nnyemaaka mbụ.
N'ihi calcium nke dị na radish, nne na-atụ anya ya, site na-eri ihe oriri, na-enyere ọkpụkpụ na anụ ahụ aka na nwa. Osisi ahụ bara ọgaranya na folic acid, nke edepụtara kpọmkwem maka ndị inyom dị ime iji gbochie mmepe nke ọrịa na nwa ahụ. Vitamin K na C belata ihe ize ndụ nke ịgba ọbara mgbe a na-amụ nwa.
A maara maka ikike imecha ihe, akwukwo nri na-enyekwa aka na ime mgbe ụmụ nwanyị na-enwekarị ụbụrụ. Nke a na-eme ka ọ bụghị nanị site na choleretic utịp, kamakwa site n'ụba cellulose, nke na-ehichapu mgbidi akụkụ ahụ, na-ewepụ ihe niile na-adịghị mma.
Nanị ihe ị ga-eji kpachara anya banyere mama gị n'ọdịnihu mgbe ị na-eri radish bụ ọcha nke akwukwo nri. Na mbụ, akwụkwọ nri mgbọrọgwụ na-ejikarị ọtụtụ nitrates, nke na-abaghị uru ọ bụla maka nwa ọhụrụ. Nke abuo, a na-ehichapụ nke ọma na-egbu egbu na-ebute ọrịa nsia na ọrịa ndị ọzọ. Ya mere, a na-atụ aro ịsacha ya nke ọma.
Ajụjụ ọzọ bara uru ilekwasị anya bụ otú e si ahọrọ radish ziri ezi. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịzụta ngwaahịa na-abaghị uru na njirimara bara uru. Ya mere Nri vitamin-bara ọgaranya nwere ezigbo mma, nke na-acha ọcha na-enweghị ntụpọ. Black specks na bee na-egosi mmalite nke usoro nke ire. Kpebisie ike na redish nwere ike ịdị na epupụta. Kemmiri na-acha akwụkwọ ndụ na-ekwu banyere ya freshness. Echefukwala inwe mgbọrọgwụ. Ha ga-eguzosi ike ma ọ bụghị raspinitsya n'okpuru mkpịsị aka, ma ọ bụrụ na ịnwere radish na-egbuke egbuke ma ọ bụ na-egbuke egbuke.
Gbalịa ka ị ghara ịzụta mgbọrọgwụ elongated. A na-anakọtakarị akụkụ ala nke radish nke kachasị ọnụ ala. Ọ bụ ya mere ọ na-atụ aro ka ị ghara iji ibelata ibelata ala na elu nke mgbọrọgwụ. Ịzụta nnukwu radish: dịka iwu, ọ baghị uru dị ka obere.
Buru n'uche na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịghọta uru bara uru nke radish. A na-akatọ ọbụna ụfọdụ ndị. Ya mere, n'ihi nkọcha na ilu, ọ gaghị eji ndị nwere nchoputa mee ihe. akpa ọnyá nke akụkụ anụ ahụ, ma ọ bụghị iji radish nwere ike iduga njo.
Dịka e kwuworo, ọnụnọ nke cyanogenic glycosides nwere ike ịkpalite onye na-elekọta, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere nsogbu ụfọdụ nke usoro endocrine. Jiri nlezianya mee ya n'oge ime ime.
N'ozuzu, radish bụ ihe oriri bara ezigbo uru. Ọ bara uru karịsịa na mmiri, ebe ọ bụ ọgaranya na vitamin dị iche iche na anụ ahụ. N'ihi nke a, o nwere ngwa ngwa na nkà mmụta ọgwụ, cosmetology na oriri na-edozi ahụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa ụfọdụ, ọ ka mma ịjụ dọkịta na mbụ.
Umu ihe ubi: uzo, ochicho mma nke saịtị na ebe kwesiri ntukwasi obi
Gaulteriya: umu, akuku, nlekọta na mmeputakwa
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Njirimara bara uru nke radishes, na otu esi esi eji ya eme ihe